Rio Ferdinand oo ku dhaleeceeyay maamulka kooxda Liverpool sababa la xiriira Jürgen Klopp – Gool FM
Rio Ferdinand oo ku dhaleeceeyay maamulka kooxda Liverpool sababa la xiriira Jürgen Klopp
(Liverpool) 23 Abriil 2021. Xiddigii hore kooxda Manchester United ee Rio Ferdinand ayaa dhaleeceeyay talaabooyinkii uu qaaday maamulka Liverpool Isbuucii la soo dhaafay, taasoo Klopp iyo ciyaartoydiisa gelisay xaalad adag.
Tababaraha reer Germany ayaa ku dhibtooday inuu jawaab ka bixiyo su’aalaha ku saabsan horyaalka cusub ee European Super League habeenkii Isniinta kahor iyo kaddib ciyaartii Liverpool iyo Leeds United.
Jürgen Klopp ayaa muujiyay sida uu kaga soo horjeedo qorshaha horyaalka cusub ee European Super League, si la mid ah kabtan ku xigeenka kooxda James Milner ayaa isla su’aashaan wax laga weydiiyay wuxuuna muujiyay sida uu kga soo horjeedo tartankii burburay wax ka yar 48 saacadood kaddib markii loo soo bandhigay saxaafada.
Ferdinand oo ka hadlaya Liverpool oo ka mid ahayd 12-kii koox ee ka mid ahaa aas-aasayaasha horyaalka cusub ee European Super League ayaa wuxuu yiri:
“Ma ixtiraamin Klopp, tababarayaasha waxay ahayd inay ka jawaabaan su’aalahaas laakiin waxaan fahamsanahay inuu ka careysan yahay, sababtoo ah wuxuu banaanka ka ahaa nidaamka kuma raacin arrintaas.”
“Way cadahay inaysan marna weydiinin wax ku saabsan qorshayaasha European Super League, maadaama uu yahay nin ajnabi ah oo guulo waaweyn u soo hooyey koox kubadda cagta ah oo ka dhisan halkan England, isla markaana uu ahaa qofkii ugu horreeyey ee Leverpool ku hoggaamiyay horyaalka Premier League, isla markaana uu dhigay uu dhigay boos aysan rumeysneyn ama aysan ku fikireynin xitaa, waxay aheyd inay ku daraan fikirkiisa go’aamadooda.”
Milkiilaha kooxda Liverpool ee John W. Henry ayaa ka soo muuqday muuqaal Arbacadii, kaas oo uu raali galin ugu muujinayay jamaahiirta Reds wuxuuna sidoo kale raaligelinta u jeediyay Jurgen Klopp iyo ciyaartoydiisa.
“Waxaan xaq u leenahay inaan ka qeyb galno Champions League.” – Zinedine Zidane